Buy Car Auto Fan (15,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
ကားအတွင်းကို စဝင်စဉ်မှာ အရမ်းပူနေပါသလား။
ပူပြင်းလှတဲနွေရာသီမှာ ကားအတွင်း အစဉ်အေးမြစေဖို.
Auto fan for car လေးကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပါပြီ။
နေစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုထားတော့ ခဏ ခဏ အားသွင်းစရာလည်း မလိုပါဘူး။
သိမ်းရတာ လွယ်ကူပြီး တပ်ဆင်တာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။
အပူဒါဏ်တွေကို အခုပင် ကာကွယ်လိုက်ပါ။
ဈေးနှုန်း – 15000 kyats
အရေးပေါ်ကား၊ ရဲကားသုံး COB မီးတန်...
Ionkini Car Air Purifier
အမည်: Car Auto Fan